C/LAAHI YUUSUF OO BOOQASHO KU TAGAY QABARIGA ISMAACIL JABARTI EE XADRAMOOT YEMEN | Toggaherer's Weblog
C/LAAHI YUUSUF OO BOOQASHO KU TAGAY QABARIGA ISMAACIL JABARTI EE XADRAMOOT YEMEN
Cabdullahi Yusuf Axmed oo dhawaan magangelyo iyo deeganaasho ah ka haley Yemen, ayaa booqasho ku tagay Goobo Qadiimi ah, isla markaana taariikh gaar ah u leh in badan oo kamid ah Soomaalida.
Cabdullahi Yusuf ayaa booqasho ku tagay halka uu ku aasan yahay Ismaaciil Jabarti oo ah Aabihii ay kasoo farcameen beelaha Daarood ee hada ku dhaqan geeska Afrika .
Cabdullahi Yusuf Axmed ayaa sheegay inay ahmiyad gaar ah u leedahay booqashada goobahaasi taariikhiga ah oo uu in muddo ah doonayey inuu booqdo, wuxuuna sheegay inuu tegi doono dhamaan goobaha Taariikhiga ah ee isku xidha Soomaalida iyo dalka Yemen oo uu hada ku nool yahay.
C/laahi Yusuf ayaa dhamaadkii sanadkii lasoo dhaafay iska casilay xilkii uu hayey, isagoo dib ugu noqday gobalada Puntland, kadibna u dhoofay dalka Yemen oo uu hada degen yahay.
Cabdullahi ayaa hada galay jawi ka gedisan noloshii uu horey ugu noolaa isagoo si weyn uga gaabsaday siyaasada tan iyo intii uu xilka isaga degay, waxaana sidoo kale dib loogu arrag inta badan saxaafada Soomaalida.